के हुन्छ प्रहरीले बरामद गरेको १० लाख बढी मास्क ? – www.Pradesh1TV.com
बिराटनगर । विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास फैलिरहँदा नेपाली बजारमा पनि मास्कको चरम अभाव भइरहेको छ । यही बेला मास्कमा कालोबजारी हुँदा नेपाल प्रहरीले छापा मारेर ठूलो परिमाणमा मास्क बरामद गरेको छ । आइतबार र सोमबार मात्रै प्रहरीले १० लाखभन्दा बढी मेडिकल मास्क बरामद गरेको छ ।
ठूलो परिमाणमा मास्क बरामद भएपछि बजारमा अब मास्कको अभाव नहुने आम जनमानसको बुझाइ छ । यहीबीच बरामद भएको मास्क अब के हुन्छ त ? सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउँछन् त ? आम जनमानसमा यो पनि चासोको विषय छ ।
बरामद मास्क अब प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्दै धेरै मानिसहरुले ठानेका छन् । तर, बरामद मास्क तत्काल बजारमा पठाइँदैछन बरु प्रहरीले सिलबन्दी गरेर थन्क्याउनेछ ।
बजारमा मास्क अभाव भएसँगै अन्य समयको भन्दा १० गुणाभन्दा बढी मूल्यमा उपभोक्ता कालोबजारीको रूपमा मास्क किन्न बाध्य छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले बरामद गरेको मास्क गोदाममा शिलबन्दी गरेर थन्क्याइने बताए ।
‘कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म बरामद सामग्री हामीसँगै रहन्छ । कानुनी प्रक्रिया सिडिओको निर्णयमा भर पर्छ,’ डीएसपी बोगटीले भने, ‘कालोबजारी सम्बन्धी कसुर हेर्ने अधिकार सिडिओसँग छ ।’
मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म बरामद मास्क जफत नै रहनेछ । प्रक्रिया टुंगो लागेपछि जफत गरिएको मास्क नेपाल सरकारबाट बिक्री हुनसक्ने कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
यसरी बजारमा मास्कको चरम अभाव भइरहेबेला मास्क थन्क्याउनु भन्दा टेण्डर प्रक्रिया गरेर कसैलाई बेच्न दिनु सरकारी अधिकारीहरुको सुझाव छ ।